Nwa ngaji Factory |China Baby spoons Nsuputa, Suppliers
Ngwa nri ụmụaka silikone ndụdụ na ngaji tọọ arịa Ọzụzụ
A na-ebu n'obi nwa ndụdụ silicone na ngaji maka Stage 1 nke ịwepu ara nwa, nwere ike ịzụlite ikike nwa ahụ iji arịa nri na inye onwe ya nri.Ha enweghị BPA, enweghị BPS, enweghị PVC, enweghị phthalate, enweghị cadmium na enweghị ndu;Nchekwa maka nwa ọhụrụ iji.
Aha ngwaahịa: Silicone ndụdụ na ngaji set
Ojiji: Nri nwa
Ngwungwu njem: dị ka achọrọ
Ọnụahịa otu: 0.38 - 0.89 USD
Nri nri silikoni nchekwa ụmụaka soft spoons nwa nri ngaji ọzụzụ nwa ngaji nri
Ngaji Silicone Baby N'ogbe Obere Ngwakọta.
Nwa ngaji maka nwa dinnerware set.
Ihe dị nro, anaghị egbu egbu, enweghị isi, 100% silicone ọkwa nri.
Ngaji n'ọnụ bụ ire ụtọ na oké.
Soro usoro ọnụ nwa, zere ilo oke nri n'otu oge.
Mpempe akwụkwọ nri dị elu LFGB kwadoro nke ọma n'ime akpa ahịhịa achara osisi Silicone ngaji nwa.
Ngaji silicone na-enye nwa ọhụrụ nri na ndụdụ omenala nwere ike ijikwa ya.
Nri onwe: zuru oke iji nyere aka duzie ụmụntakịrị ka ha nye onwe ha nri.
Ọ dị mma iji: enweghị BPA, enweghị BPS, enweghị PVC, enweghị phthalate, enweghị cadmium na enweghị ụzọ.
Ihe na-eguzogide nje bacteria: Silicone nwere ihe na-eguzogide nje bacteria, na-eme ka ọ dị mma na ịdị ọcha.
Agba efu BPA na-agbanwe Babyske Silicone Ngaji nwa maka ọzụzụ nwa ọhụrụ ngaji inye nri nwa
Ngaji silicone na-enye nwa ọhụrụ nri na ndụdụ omenala nwere ike ijikwa ya
Nri onwe onye:zuru oke iji nyere aka na-eduzi ụmụntakịrị ka ha nye onwe ha nri.
Ọ dị mma iji:Enweghị BPA, enweghị BPS, enweghị PVC, enweghị phthalate, enweghị cadmium na enweghị ndu.
Ụdị rọketị na-ekpo ọkụ na-enye nwa nri karama dị nro ngaji na-agbanwe tableware Spoons Silicone
Ọ dị mma iji: enweghị BPA, enweghị BPS, enweghị PVC, enweghị phthalate, enweghị cadmium na enweghị ndu.
Mpempe akwụkwọ aha ya bụ Teether Ngaji Agba Ọzụzụ Ụmụaka Na-eri Onwe Ha Na-eri obere nri Cereal Silicone Spoons Baby
100% SAFE Mpempe anyị bụ nke dị oke mma, silicone ọkwa nri, yana nchekwa efere efere.Ha enweghị onwe ha kpamkpam na BPA, PVC, lead, phthalates na ihe ọ bụla na-egbu egbu.Nwee obi iru ala mgbe ị na-eji ngaji silicone anyị.
Soft chịngọm-Enyi na enyi dị nwayọọ na chịngọm nwa na mmetụta na-atọ ụtọ nke silicone na-eme ka nwa gị chọọ iri nri.Ngaji ndị a na-enyere aka ibelata nchekasị nwa gị n'ihi ọzịza na-egbu mgbu n'oge ogbo eze.
Ngaji na-emighị emi, ngaji anyị na-atụ nri kwesịrị ekwesị maka oge ọ bụla, na-egbochi iribiga nri ókè ma ọ bụ ihe ize ndụ ịkpagbu, ma bụrụkwa nke ọma maka ịchafụ.
Ọ dị mfe maka ndị nne na nna, a na-emepụta ngaji anyị ergonomically iji gbatịa nri nke ọma n'ọnụ nwa gị na obere mbọ.
Nnukwu onyinye nwa ọhụrụ ga-enwe ekele maka nne na nna ọ bụla.Ịzụ nwa bụ ọrụ siri ike, na ngwá ọrụ ọ bụla na-eme ka ihe dị mfe na-enwe ekele mgbe nile.